I-China i-24, ecacileyo, i-10 ml ye-Glass Roll kwi-Perfume Bottles nge-3 ml Dropper yefektri kunye nabaxhasi | Jin Guan Yuan
I-24, ecacileyo, i-10 ml yeglasi yokuqengqeleka kwiibhotile ze-Perfume nge-3 ml Dropper
I-24 ecacileyo, yeglasi yokuqengqeleka kwiibhotile ngephepha elimnyama.
Ifanelekile kwioyile eyimfuneko, ioyile yeziqholo, okanye obunye utywala.
Kukhuselekile, kukhuselekile kwaye kufanelekile ukupakisha
Igqibelele ngohambo, kwaye ilungele ngokufanelekileyo esikhwameni sakho.
1 I-Dropper ifakiwe
★ Ibhotile yeglasi yeoyile eyimfuneko yenziwa ngeglasi enganyangekiyo eyenza ukuba ibe nzima, igudle kwaye ingothuki. Ibhotile yeoyile ikhusela ioyile eyimfuneko kwimisebe eyingozi ye-UV ukuyisindisa ekubulalekeni ngokukhawuleza.
★ Iibhola zokuHamba ziNtsimbi
Iibhola zokuqengqeleka zenziwe ngentsimbi engenasiseko, enganyangekiyo kwaye iyenziwa kakuhle. Ubungqongqo buthintela naluphi na uhlobo lokuvuza. Ngomvuli wethu wokuncoma, umlo ungasasazeka ngokulula kwaye uzaliswe
★ Iingqekembe zegolide
★ Umlomo wokugqitywa kwe-screw ngentambo uhambelana kunye ne-plated aluminium alloy cap, ehambelana kakuhle kwaye inokuthintela ngokufanelekileyo nakuphi na ukuvuza kwamanzi. Unako kwakhona ukuyila ioyile yakho eyimfuneko ngezi bhotile zinokukunceda ukuba uphumle ngexesha le-salon okanye i-aromatherapy.
★ Iza iphethe i-12, 10ml kwibhotile nganye. Umthamo okuvumela ukuba ugcine i-Synthesis yeoyile, ioyile yendalo ebalulekileyo, i-oyile, iziqholo okanye olunye ulwelo luhlangabezana neemfuno zakho zononophelo lwemihla ngemihla, ubuso kunye nomzimba. Ukupakisha kuyenza ifaneleke ekuhambeni kwaye ilula ngokulula kwisipaji sakho
★ Ii-Funnels ezi-2 kunye nee-2 Droppers zinikezelwe ukuzalisa ioyile efanelekileyo ngokulula. Ukwafumana izitikha ezingama-24 zokumakisha kunye nokuhlula iioyile ezifanelekileyo kunye neebhola ezi-2 zokuqengqeleka, Ngeebhotile zethu zeglasi zeoyile, unokukonwabela lonke umzuzu ngexesha lokuthambisa okanye lokucoca ubuhle.
Ezi zinto zisemgangathweni ophezulu, zicace glasi, kwiibhotile zigqibelele ukusetyenziswa ngeoyile efanelekileyo, ioyile yeziqholo, nolunye ulwelo. Qhoboshela ibhola eqengqelekayo ngokubeka i-roller-ibhola kwibhotile kwaye uyiqinise ngokungqongqo ikhephu de ibhola iqengqele ngaphakathi. Sebenzisa ibhotile yokufaka ukuze usebenzise inani elifanelekileyo lemveliso ixesha ngalinye. Susa i-roller-ibhola ngokusebenzisa uxinzelelo kunye ne-cap.
Edlulileyo: Ivenkile enkulu emnyama matte ebalulekileyo yebhotile yeebhotile zeglasi yangaphantsi kwibhotile emnyama ukukhanya kweziqhumiso ibhotile yesipreyi emnyama
Okulandelayo: Ivenkile enkulu yokutshiza ibhotile yotywala yangaphantsi kwebhotile emdaka emnyama isibulala-zintsholongwane isitya sebhotile yesentloko yentloko yeglasi
Iglasi yeJar Cosmetic, Iglasi yezipho zeglasi, Iiglasi zeCosmetic zeGlasi kwiibhotile zeoyile, Ibhotile ye-cosmetic, Iglasi yeBhotile yeZithambiso, Iseti yeBhotile yeZithambiso,